Ekwe omume nke na-agbake faịlụ site na LG ekwe ntị:
Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike naghachi faịlụ na ị ihichapụ ma ọ bụ usoro carelessly on LG ekwe ntị, mgbe mgbe ụfọdụ na ị nwere ike ọ bụghị. Gịnị bụ ihe na-achị? N'ezie na e nwere otu onye. Ọ dị ya nnọọ adabere na ebe ị ihichapụ ma ọ bụ Ọkpụkpọ faịlụ na ihe ị na-mere mgbe ihe mberede ahụ.
Ọ bụrụ na ị ehichapụ ma ọ bụ formatted faịlụ site na SD / CF kaadị gị LG ekwentị, ekele! E nwere ihe a ezi ohere i nwere ike weghachite ha. Niile ị chọrọ bụ a data mgbake ngwá ọrụ. N'ezie, ị na-agaghị kwesŽrŽ dezie ọ bụla data azụ gị LG ekwentị ma ọ bụ na kaadị mgbe ọdachi. Dekwasịzie ga-eme ka gị aga na faịlụ nnọọ ike-natara.
Tupu ị nwere ike na-amalite, na-a LG ekwentị faịlụ mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac (maka Mavericks). Ma nke software bụ pụrụ ịtụkwasị obi na ọkachamara. Ị nwere ike iji ha na-agbake photos, video na ọdịyo faịlụ site LG ekwe ntị, n'agbanyeghị na ị na ihichapụ, format ọ bụ furu efu ha ruru ihe ndị ọzọ. Na ị na-agaghị jụrụ na-nyochawa ọkà. Ị nwere ike ịrụcha zuru mgbake ngwọta na 3 nzọụkwụ.
Download free ikpe mbipute a LG ekwentị data mgbake software ugbu a. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị na-ehichapụ faịlụ na ekwentị esịtidem ebe nchekwa, nwute na-ekwu na e nweghị ekwe omume n'ihi na ị na-agbake ha, n'ihi na ekwentị esịtidem ebe nchekwa bụghị a n'ozuzu kaadị. N'ihi ya, anya, ọ dịghị mgbake software na ike ime nke a.
Olee otú naghachi faịlụ site na LG ekwe ntị, gụnyere foto, video & ọdịyo
Nzọụkwụ 1 Jikọọ gị LG ekwentị na kọmputa
Nke mbụ niile, jikọọ ekwentị gị na kọmputa na a dijitalụ USB, ma ọ bụ i nwere ike wepụ nke kaadị ebe nchekwa na jikọọ na ya na a kaadị agụ. Mgbe ahụ malite usoro ihe omume na pịa ka "Malite" LG ekwentị data mgbake.
Nzọụkwụ 2 iṅomi furu efu faịlụ gị LG ekwentị
Họrọ ekwentị ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa, na pịa "iṅomi" na-chọta furu efu faịlụ.
Nzọụkwụ 3 Preview na-agbake faịlụ na LG ekwe ntị
Ịnwere ike ihuchalu recoverable photos otu otu na-elele àgwà mgbe iṅomi. Audio na video faịlụ-apụghị preview tupu mgbake. Ị nwere ike ịlele faịlụ niile ị chọrọ na ịrụ mgbake na otu Pịa na "Naghachi" button.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị LG cell igwe ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Video nkuzi nke LG ekwentị mgbake
4 Ụzọ Ka izipu SMS site na kọmputa na-akporo ekwentị
> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ faịlụ site LG Cell Phone na ala